စည်းကမ်း ချိုးဖောက်သည်ဟူသော သတင်းများကို ဒမ်ဘီလီ၏ အေးဂျင့်ငြင်းဆို အပြုအမူများကို ပြောင်?? - Yangon Media Group
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး ဒမ်ဘီလီအနေဖြင့် အသင်း၏စည်း ကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခဲ့သဖြင့် ဘက်တစ်နှင့်ပွဲလူစာရင်းမှ ချန်လှပ်ခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဖျားရောဂါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းမဆင်းနိုင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏အေးဂျင့်က ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ဒမ်ဘီလီသည် ဘက်တစ်ကို ၄-၃ ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ဘာစီလိုနာလူစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ယင်းမှာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ အချိန်နောက်ကျမှ ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း များက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် ဒမ်ဘီလီ၏အေးဂျင့်ဖြစ်သူ မူဆာဆစ်ဆိုကိုက ”ဒမ်ဘီလီအပေါ် ဝေဖန်မှုအားလုံးက ကျွန်တော့်အတွက် ရယ်ချင်စရာပါပဲ။ အသင်းအစည်းအဝေးကို နောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေက အင်တာနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာကတည်းက ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။ ဒမ်ဘီလီအနေနဲ့ နောက်ကျခဲ့တာမျိုး မရှိတဲ့အတွက် သတင်းစာတွေက တလွဲရေးသားခဲ့ကြတာတွေကို အံ့အား သင့်မိပါတယ်။ နည်းပြကိုယ်တိုင်ကလည်း နောက်ကျလို့ လူစာရင်းမှာမထည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ အတည်ပြုပြီးသားပါ။ ဘက်တစ်နဲ့ ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ဒမ်ဘီလီဖျားနေခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ တစ်ညလုံးမအိပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေလို့ မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့် ခန်းကို လွဲချော်ခဲ့ရတာပါ။
သူ့ရဲ့အခြေအနေကို ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးနိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့အသိပေးမှုတွေမလုပ်ခဲ့လို့ အသင်းက ကျွန် တော်တို့ကို အပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။ အသိပေးမှုနောက်ကျခဲ့တာ မှန် ပေမယ့် အစာအိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖျားဝေဒနာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ကိုလွဲခဲ့ရတာလို့ အသင်းကအတည်ပြု ထားချိန်မှာ အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာသေးလို့ အံ့အားသင့်မိပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြင်သစ်နည်းပြ ဒက်ချမ့်က ဒမ်ဘီလီမှာ မိမိတို့နှင့်အတူရှိစဉ်အတွင်း လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကို နောက်ကျလေ့ရှိသဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်သော်လည်း ကစားသမားအနေဖြင့် ၎င်း၏အပြုအမူများကို ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ ဒက်ချမ့်သည် နယ်သာလန်နှင့် နေးရှင်းလိဂ်၊ ဥရုဂွေးနှင့် ခြေစမ်းပွဲများ ကစားမည့် ပြင်သစ် လူစာရင်းတွင် ဒမ်ဘီလီကိုရွေးချယ်ထားသော် လည်း အောင်မြင် သော ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ရန် စည်းကမ်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း ဒမ်ဘီလီကိုသတိပေးခဲ့သည်။
ဒက်ချမ့်က ”ကလပ်အသင်းကိစ္စတွေကို ကျွန်တော် ဝင်မစွက်ချင်လို့ ဒမ်ဘီလီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာစီလိုနာနဲ့ ကျွန်တော်စကားမပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒမ်ဘီလီဟာ ပြင်သစ်မှာလည်း ဒီလိုပဲ နောက်ကျ လေ့ရှိလို့ သူ့အနေနဲ့ ဘယ်အသင်းမှာမဆို စည်းကမ်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရိုကစားသမားတစ်ဦးအတွက် လို အပ်တဲ့အချက်ပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းမှ ကလေးငယ်များအုပ်စုအတွင်း မော်တော်ကားတစ်စီးက အရှိန်နှင့်ဝင်တိုက်၊ န??